Saddex Nin oo Ku Eedaysnaa Dilkii iyo Kufsigii Caasho Ilyaas oo dil lagu xukumay.
Sunday May 12, 2019 - 15:02:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maxkamadda darada koowaad ee maamulka isku magacaabay Puntland ayaa go'aan kama dambeys ah ka gaartay kiiska rag ku eedeysnaa in ay ka dambeeyeen fal kufsi iyo dil isugu jiray oo lagula kacay gabar 12 sana jir aheyd.
Garsooraha maxkamadda ayaa warbaahinta u sheegay in lasii daayay 7 wiil dhalinyara ah oo kamid ahaa dadkii lasoo eedeeyay islamarkaana wax dambi ah lagu waayay.
illaa sedax wiil dhalinyaro ah ayay maxkamadda maamulka Puntland ku xukuntay dil kuwaas oo laba kamid ah ay yihiin walaalo wada dhashay ,eedaysanayaasha laxukumay ayaa kala ah C/fataax C/raxmaan Warsame, C/salaan C/raxmaan Warsame iyo C/shakuur Maxamed Dige.
Dhacdadii bishii February ee sanadkan ka dhacday Waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa fal dil iyo kufsi ah loogu geystay gabar 12 sana jir aheyd oo lagu magacaabayay Caaisha Ilyaas, falkaas naxdinta leh ee gabadha lagula kacay ayaa caro ka dhax dhaliyay bulshada magaalada Gaalkacyo.
Degmooyinka iyo deegaannada uu ka arrimiyo maamulka isku magacaabay Puntland ayuu kufsigu joogta ka yahay, bishii lasoo dhaafay gudaha magaalada Garoowe waxaa lagu kufsaday haweenay xaamila ah kadibna toogasho ayaa lagu dilay